Waxaa jiray godad halis ah oo laga dhex helay warshadaha kooxda dhimista oo aan weli laga guuleysan. Cabashooyinka ka imanaya ganacsiyada isticmaalaya Groupon iyo LivingSocial ayaa farta ku fiiqay arrimo dhowr ah: Qiimo dhimista loo baahan yahay waa mid aad u sarreeya oo dhaawaceysa ganacsiyada. Bixinta sicir-dhimista si dhakhso leh uma timaaddo, taas oo keeneysa arrimo lacag-bax ah oo ba'an oo aasay meheradaha qaarkood. Macaamiisha ay soo jiitaan waxay u joogaan kuwa gaarka ah oo keliya oo dib uma soo noqon doonaan. Shirkaduhu waa si gardarro ah